Matambudziko akakosha eEuropean ekushanya akaoneswa kuSlovenian Forum
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Slovenia Kuvhuna Nhau » Matambudziko akakosha eEuropean ekushanya akaoneswa kuSlovenian Forum
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Slovenia Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ino inguva yekugadzirisa zvikanganiso zveindasitiri yekushanya izvo zvakakonzerwa nekuwedzera mumakore makumi mashanu apfuura uye kushandura kushanya kuva indasitiri yakasvibirira, yedhijitari uye inosanganisa.
Bled Strategic Forum musangano wepasi rese muCentrals neSouth-Eastern Europe.
COVID-19 denda rakamutsa mibvunzo yakawanda yekushanya.
Basa rekushanya padanho reEU rinofanirwa kuongororwa.
Iyo Bled Strategic foramu yakashanduka ikava musangano wekunze wepasi rose muCentral neSouth-Eastern Europe. Chinyorwa chegumi nematanhatu chakaitika 16 Nyamavhuvhu - 31 Gunyana mune fomu yakasanganiswa. Dare rezvekushanya rakaitwa musi wa2 Gunyana rakaunza pamwechete nyanzvi dzepamusoro kubva kuSlovenia nemasangano ane mukurumbira, anosanganisira EC, UNWTO, WTTC, OECD, ETC, HOTREC, ECM, kuzokurukura ramangwana rekushanya (kweEuropean).
Nyanzvi dzakakurumbira dzenyika dzepasi rose neSlovenia, vashanyi, mapurisa uye vamiririri vekushanyirwa kweSlovenia vakataurwa negurukota rezvehupfumi uye Technology Zdravko Počivalšek, Director-General weInternal Market, Indasitiri, Bhizimusi uye maSME kuEuropean Commission Kerstin Jorna, Director weSlovenia Yevashanyi Bhodhi MSc. Maja Pak, Director weDhipatimendi reEuropean ku UNWTO Prof. Alessandra Priante uye Mutungamiriri wePortugal National Tourist Board uye Mutungamiri we European Tourism Commission (ETC) Luis Araújo.
COVID-19 denda rakapa mibvunzo yakawanda yekushanya, pakati pezvinonyanya kushushikana kupona uye kupora, pamwe nekushandurwa kweindasitiri yekushanya kuva yakasimba uye inochengetedza. Zvisinei nemamiriro ezvinhu akaoma, fungidziro ine tarisiro yemasangano akakosha epasirese epasi rose ari kuwedzera. Tourism Panel yegore rino yakurukura mubvunzo uyu Remangwana richaunza chii kuEuropean Tourism.
Panelists vakabvumirana kuti denda iri rakakanganisa zvakanyanya indasitiri yekushanya uye rakakonzera matambudziko mazhinji, pamwe nemikana. Ino inguva yekugadzirisa zvikanganiso zveindasitiri yekushanya izvo zvakakonzerwa nekuwedzera mumakore makumi mashanu apfuura uye kushandura kushanya kuva indasitiri yakasvibirira, yedhijitari uye inosanganisa. Mhedzisiro mhedzisiro yakatarwa papaneru yaive:
Kuvimba kwevashanyi pakufamba kunoda kuvakwazve.
Zvifambiso zvekufamba uye kutaurirana pamwe nekubatana pakati peNhengo dzeNyika zvine chekuita nezvirambidzo zvekufamba, bvunzo dzeCOVID uye mitemo yekuzvitsaurira inoda kuvandudzwa.
Nzira yekuchinja kwakasimba kunodiwa.
Zviratidzo zvitsva zvekuita zvinodiwa.
Shanduko yedhijitari yeindasitiri yekushanya inoda kutsigirwa nekusimudzirwa.
Investments uye EU mari kugoverwa mukusimudzira uye digitalization yeindasitiri yekushanya inodiwa.
Shanduko yeDMO mune yavo basa kuti vashandire kushandisika kwemaindasitiri shanduko kuita girini, inosanganisira uye nedhijitari inoda kutsigirwa.
São Tomé ne Príncipe vanowana $ 10.7 mamirioni kubva kuAfrica ...